DEGDEG: Golaha Midowga Musharaxiinta oo Qaadacay Shirkii Madaxweyne Framaajo. – XAMAR POST
By Mohamed Abdi Last updated Mar 2, 2021
Warsaxaafadeed ay goordhaw soosaareyn gudiga musharaxiinta waxaa ay si kulul uga horyimaadeyn shir uu maanta ku baaqay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo .
Golaha ayaa sicad waxaa ay madaxweyne Farmaajo ugu eedeeyeen in uu carqaladeenayo hishiiskii ay wada gaareyn dhamaadka bishii hore ee Febraayo Reesal wasaare Rooble iyo Golaha.
Wadahadallada oo laga gaaray is faham horu –dhac ah ayaa dajiyey culeyskii iyo xaaladii kacsanaanta aheyd ee dalka ka taagnayd, gaar ahaan Magaalada Muqdishu, taasoo abuurtay rajo billow ah oo lagu dhammeyn karo is-marin-waaga taagan ayaa lagu yiri warsaxaafadded ka golaha Midowga musharaxiinta ay soo saareyn maanta .
Warsaxaafadeedka yaa imaanaya xili uu Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu cilaamiyey shir looga hadli doono arrimaha doorashooyinka Soomaaliya oo dhacaya 4-ta Biishaan Maarso xiligaas oo ay horay ugu balameyn reysalwasaare Rooble iyo Golaha Midowga Musharaxiinta in mar kale la iskugu yimaado shir kale .
Warsaxaafaddeedka oo dhameystiran Halkaan Hoose ka Aqriso.
Ref: GMMM/08/21. Date: 02/03/21
Golaha Midowga Murashaxiinta wuxuu qayb ka ahaa wadahadal u dhexeeya Raysalwasaaraha Xukuumadda xil gaarsiinta Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo xal loogu raadinayey dhacdadii 19 Febraayo iyo is-marin-waaga doorashooyinka heer Federaal.
Wadahadalka waxaa sidoo kale qayb ka ahaa Madaxweynayaasha dawlad Goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir.
Wadahadallada oo laga gaaray isfaham horu-dhac ah ayaa dejiyey culeyskii iyo xaaladdii kacsanaanta ahayd ee dalka ka taagnayd, gaar ahaan magaalada Muqdisho, taasoo abuurtay rajo billow ah oo lagu dhammeyn karo is-marin-waaga taagan.
Wareeg kale oo wadahadal ayaa labada dhinac ugu ballameen maalinta Khamiista ah ee ay bishu tahay 04/03/21 si loo dhammeystiro arrimaha qabyada ah ee la xariira cidda yeelanaysa mas’uuliyadda hoggaamineed ee amniga iyo doorashooyinka, maaddaama uu muddo xileedkii hay’adaha dastuuriga ah ee dalka uu dhammaaday, kaalinta Midowga ee wadahadallada Doorashooyinka iyo furitaanka maslaxada siyaasadeed ee dalka.
Waxaase nasiib-darro ah in madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday Maxamed C/laahi Farmaajo uu si ula kac ah u xagal- daacinayo wadahadallada u dhexeeya Raysalwasaaraha iyo Midowga, kaddib markii uu isla-maalintii shirka loo ballansanaa uu ku dhawaaqay shir uusan sharciyad u lahayn u yeeriddiisa, kaasoo uu ku doonayo in uu ku carqaladeeyo wadadallada u dhexeeya Raysalwasaaraha iyo Midowga Murashaxiinta.
Haddaba Golaha Midowga Murashaxiinta wuxuu ka digayaa cawaaqib xumida ka dhalan karta in la fashaliyo wadahadalladaas, wuxuuna ku baaqayaa in fursad la siiyo.
Dhinaca kale, Goluhu wuxuu shacabka Soomaaliyeed ugu baaqayaa in ay kala soo qayb galaan Muddaharaadka maalinta Sabtiga ah 06/03/21 ka dhacaya Daljirka Dahsoon. Wuxuuna Xukuumadda ugu baaqayaa in ay gudato waajibka sugidda amniga shacabka iyo dibadbaxayaasha sida heshiisku ahaa.
Goluhu wuxuu ugu baaqayaa raysalwasaaraha, madaxwaynayaasha dawlad goboleedyada, iyo beesha caalamka in aysan qayb ka noqon tallaabooyinka gurracan ee uu madaxweynaha xilkiisu dhammaaday ku carqaladaynayo xasilloonida dalka iyo xal u helidda geeddi socodka doorashooyinka.
Puntland oo Wariye ku Riday Xukun